कम खर्चमै काठले घर डेकोरेसन गर्नुहुन्छ ? यी हुन् २१ अनौठो डिजाइन – नेपाली संगसार
कम खर्चमै काठले घर डेकोरेसन गर्नुहुन्छ ? यी हुन् २१ अनौठो डिजाइन
नेपाली संगसार calendar_today ७ माघ २०७७, 8:47 am
तपाई आफ्नो घरलाई आकर्ष बनाउन चाहनुहुन्छ । यदि चाहानुहुन्छ भने घरमा काठको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । घरलाई काठको प्रयोगले सजिलै सजावट गर्न सकिन्छ । काठले घर डेकोरेसन गर्न मोटो रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
तपाईंको आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार काठको प्रयोग गरि घर सजाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं महंगा फर्निचरतिर ध्यान नदिनुस् । केबल आफुसँग भएका काठबाट घर कसरी आकर्षक ढंगले डेकोरेसन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।
तपाईंको वरिपरि काठका टुक्राहरु हुन्छन् । प्रयोग नभएका फाल्तुु काठले घर साँघुरो बनाइदिएको हुन सक्छ । यदि तपाईंले चाहनुभयो भने तिनै काठलाई घर सजाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो पनि आफ्नै मिहिनेतमा कलात्मक डिजाइन तयार गर्न सक्नुहुन्छ । कर्मी लगाएर काम गर्नुभयो भने पनि धेरै खर्च लाग्ने छैन ।
वुड होम डेकर गर्दा तपाईंको पैसा पनि बचत हुन्छ । र, तपाईंको घर पनि राम्रो देखाउँछ । तपाईं कुनै बजेट बनाइराख्न जरुरी छैन । हामीले भनेअनुसार कुनै वित्तीय प्रतिवद्धता बिना नै घरको नयाँ लुक्स दिनुहोस् । यसका लागि तपाईंसँग जाँगर र अठोट हुनुपर्छ ।
हामी तपाईं तपाईंलाई काठबाट घर सजावट गर्ने केही उत्तम तस्वीहरु देखाउँदै छौं जसबाट तपाईं आफ्नो घर सजावट गर्ने आइडिया लिन सक्नुहुन्छ । हामी तपाईंको घरलाई काठबाट सजावट गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले केही उपाय सिकाउँदै छौं ।
काठबाट घर सजाउने आइडिया